Kuyini ukubheja kwezemidlalo ku-inthanethi? - Amakhodi weBhonasi yeKhasino aku-inthanethi
Kuyini ukubheja kwezemidlalo ku-inthanethi?
Posted on July 5, 2018 Umbhali Andrew	Amazwana Off Kukuphi Ukubheja Kwezemidlalo Kwe-Intanethi?
Emisebenzini yezemidlalo ye-inthanethi ukubheja yilokho nje igama elikutusayo, ubheja ngomsebenzi wezemidlalo ongawukhetha ngokusebenzisa noma yimiphi imidlalo eminingi yezemidlalo ebhebhisa amasayithi e-inthanethi kuNet. Emisebenzini yezemidlalo ye-inthanethi ukubheja kuthole isikhalazo esisheshayo phakathi koquqaba lwamazwe omhlaba kakhulu kangangokuba kulinganiselwa ukuthi imali mboleko ephindwe kahlanu yafakwa ngqo emisebenzini yezemidlalo yokubheja ngokuqhathaniswa nemisebenzi yezemidlalo ebheja emithonjeni yokubheja ye imbulunga - Las vega.
Izindlela ezenziwa ngemisebenzi yezemidlalo ye-intanethi ziyizinto ezifanayo kuzo zonke izindawo zokugijima kanye namasayithi. Imisebenzi eminingi yezemidlalo e-inthanethi eyenza ukubheja kwe-intanethi kanye nokugembula ibhizinisi kanye nokugadla nokusebenzisa i-akhawunti yangasese. Amafemu amaningi ahlinzeka ngemisebenzi yezemidlalo ye-intanethi empeleni abelokhu eqhuba izinkampani zokukhwabanisa izitini nokuhamba iminyaka eminingi.
Uma ungaphezu kweminyaka eyishumi nesishiyagalombili futhi unqume ukuzama isandla sakho emisebenzini yezemidlalo eku-inthanethi ubheja isiza se-inthanethi esinikeza ukubhaliswa okuphephile nokuvikelekile, sisebenzisa amathuba abuyekeziwe, okunika amandla okubeka izinqola ngaphandle kokudinga ukulanda nokufaka noma yiluphi uhlobo lohlobo yohlelo lwe-software, isebenzisa uhla olwanele ezinhlotsheni zama-wagers ongazibeka kanti futhi newebhusayithi uqobo idinga ukubhaliswa esizweni lapho isebenza khona.
Kungumsebenzi wakho ukuqinisekisa ukuthi imisebenzi yemidlalo ye-intanethi eqhuba ibhizinisi oyibhalisile nayo inayo Ama-Free and Piclays idumela eliku-inthanethi lokuphathwa ngendlela enengqondo, uhlelo lokukhokha olusheshayo nolunokwethenjelwa - amanye amawebhusayithi anohlelo lokukhokha ngosuku olufanayo, ucingo lwosizo lwama-24/7 olunikezwa imibuzo yabathengi, njalonjalo. Hlola imisebenzi eminingi yezemidlalo yokubheja amawebhusayithi futhi uye kuzithangami ezifanele ze-inthanethi ukuthola isiphakamiso sokuthi iyiphi iwebhusayithi enikeza ulwazi olufanelana kangcono nobuntu bakho.
Awunqunyelwe ubuzwe ekukhetheni kwakho iwebhusayithi yezemidlalo yokubheja kwi-inthanethi. Awunazindleko zokubheja ngokubukisa ngezikhathi ezivela kuwo wonke umhlaba. Yini okungaphezulu, I-Bovada Sports amawebhusayithi amaningi ahlinzeka ngezifiso kulimi lwakho kanye nemali yakho, ngakho-ke ubona ngqo lokho okubheja ngakho nokuthi ubheja malini ukuze uthokoze ngokunganaki.
Amawebhusayithi e-inthanethi okushayela amafilimu aphelile ngokubaziwa kabanzi ngenxa yokuthi atholakale lapho umuntu angathuthukisa khona amakhamera ngesikhathi sakhe esikhethiwe kanye nendawo. Ukuhlukumezeka owutholayo emisebenzini yangempela yezemidlalo yokugembula kumisiwe.
Ukuze uthole amageyimu amaningi amageyimu kanye nabathandi bezemidlalo abanokufinyeleleka enetheni, ezemidlalo I-NFL Picks imisebenzi ehambayo ingaba yimithombo yemali kanye nokuthokozisa. Ukuthakazelisa abazizwayo ngokugcina ithrekhi yomdlalo ngamunye wevidiyo kwanele ukubajabulisa.
Ungalokothi uphendule ema-imeyili lapho ibhizinisi lakho lokubhuka noma lokugembula likucela iphasiwedi noma ulwazi olulodwa. Ngokuqinisekile umuntu othile uzoba nombono wabo ukuze uthole imininingwane yakho futhi akuthathe uma bewuthola.
I-150 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-NordicSlots Casino
I-160 yamahhala i-spin bonus enenhlanhla
I-20 yamahhala i-spin bonus ku-RealDealBet Casino
I-165 yamahhala i-casino e-Mr Green Casino
I-115 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-ExtraSpel Casino
I-30 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-GDay Casino
I-90 yamahhala e-spin casino e-Sugar Casino
I-125 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Yako Casino
I-90 yamahhala i-casino e-888 Casino
I-130 yamahhala e-AllIrish Casino
I-90 yamahhala i-spin casino e-Las Vegas USA Casino
I-15 yamahhala i-spin bonus ekamelweni leCasino
Ibhonasi engu-65 yamahhala ediphozithi eBuck & Butler Casino
I-140 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-Spectra Casino
I-80 yamahhala i-spin bonus ku-Polder Casino
I-45 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi e-MoonBingo Casino
I-45 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-NorskeAutomater Casino
I-25 yamahhala i-bonus ku-Hello Casino
I-30 yamahhala igodla ibhonasi yekhasino ku-TouchLucky Casino
I-60 ayikho ibhonasi yediphozi ku-PlayFrank Casino
I-90 yamahhala i-spin bonus e-Dublinbet Casino
khulula vlt imidlalo